Seynisyahan Soomaaliya oo uu ku dhacay Caabuqa Coronavirus!!!! – Xeernews24
Seynisyahan Soomaaliya oo uu ku dhacay Caabuqa Coronavirus!!!!
24. März 2020 /in WARAR/NEWS /von admin
Seynisyahan Soomaali ah oo uu ku dhacay Caabuqa Coronavirus
Xasan Cabdi Dhoorre waa Seynisyahan Soomaali ah oo uu ku dhacay coronavirus
Seynisyahankan wuxuu ku takhasusay baaritaanka cudurrada faafa
Seynisyahan Xasan Cabdi Dhoorre
Waxaa la aaminsan yahay inuu yahay nooc caabuq ah oo ka mid ah bahda Fayraska ee loo yaqaanno coronavirus, kaasoo aan horay loogu arkin bani’aadanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/03/seynis.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2020-03-24 10:56:122020-03-24 10:56:12Seynisyahan Soomaaliya oo uu ku dhacay Caabuqa Coronavirus!!!!
Coronavirus: Maxay tahay faa’idada adduunka uu ka dhaxlay? Macluumaadka ku saabsan Xanuunka Dilaaga ah ee Corona-Virus.